Amawebhusayithi Apholile Ama-15 Ajabulisayo Wokuzijabulisa Noma Kunini - Ezokuzijabulisa
Amawebhusayithi Apholile Ama-15 Ajabulisayo Wokuzijabulisa Noma Kunini
Kulesi sizukulwane noma nini lapho unesithukuthezi futhi ungenalutho ongakwenza, esikwenzayo sonke ukuzama ukuthola okuthile kwi-Intanethi njengoba wazi ukuthi i-Intanethi ngokuqinisekile ingenye yezindawo ezinhle zokubulala isikhathi sakho.Singathola amawebhusayithi amangazayo futhi athakazelisayo angasisiza ukuthi sibulale isikhathi noma kunini lapho sifuna khona.
Ngiphinde ngabona abanye abantu abasachitha isikhathi sabo esiningi kumawebhusayithi adumile abakujwayele nje.Lapha ngithole amanye amawebhusayithi amnandi futhi athokozisayo engifuna ukuwabelana nani bafana.
Ngakho-ke, usuku nje kuphela, nina bantu anidingi ukuvakashela amanye amawebhusayithi futhi nibheke lawa mawebhusayithi apholile futhi athakazelisayo, angakusiza ukubulala isikhathi sakho futhi futhi ungafunda into eyodwa noma ezimbili ezimangalisayo ngenkathi ukuyo.
Uhlu Lwamawebhusayithi Apholisayo Apholile:
Kulungile, ngakho-ke ngokuyisisekelo le webhusayithi ibhekana nakho konke okuhlekisayo emhlabeni we-inthanethi. Siyalazi iqiniso lokuthi yonke intsha iyakuthanda okuqukethwe okuhlekisayo, akunjalo?Leli sayithi ligxile kakhulu kokuqukethwe kwezithombe futhi nezindatshana ezilapha kumnandi kakhulu ukuzifunda. Uzokujabulela ukuyifunda.
I-panda ingahle ibe nesithukuthezi. Kepha, awusoze waba nesithukuthezi uma uvakashela le webhusayithi. Ungazama impela.
Leli elinye lamawebhusayithi athandwa kakhulu phakathi kwentsha nentsha. Kuthathe ugqozi ku-anyanisi.
Le webhusayithi inikeza ama-listicles, nama-athikili aqukethe izithombe ezihlekisayo ezifakwe izithombe kanye nama-GIFS ahlekisayo angenza wena noma ubani uhleke noma kunini.
3. Ukuhlaselwa Kwezinhle
Ukuhlaselwa kwewebhusayithi enhle kukhombisa kakhulu izithombe ezinhle zezilwane ezahlukahlukene. Noma yimuphi umthandi wezilwane angahlanya ngokuvakashela le webhusayithi enhle. Uyazi ukuthi umuzwa 'aww'? Yebo, lapho-ke udinga ukuvakashela le webhusayithi ngokuqinisekile.
Kulungile, ngakho-ke le webhusayithi nakanjani iyiwebhusayithi yemilingo noma kunalokho izizwa njengenye. Lapha ungacabanga nganoma yimuphi umlingiswa emhlabeni wonke futhi ngemibuzo embalwa, izokunikeza igama elifanele lanoma yimuphi umuntu noma uhlamvu obukade ucabanga ngalo.
Ngiyakhumbula ngenkathi ngisebenzisa lokhu okokuqala, abangane bami bangicela ukuthi ngicabange nganoma yimuphi umlingisi bese ngiphendula imibuzo ethile. Angikholwanga ngamehlo ami lapho kukhonjiswa imiphumela. Ngimangele nje ngale webhusayithi.Uma ungangikholwa lapho-ke ungahamba uyozama ngokwakho.
Ake sithi, ngolunye usuku unquma ukuphekela wena noma amalungu omndeni wakho konke ukudla okumnandi. Kepha, ubona sekwephuze kakhulu ukuthi awunazo izithako ezidingekayo. Futhi-ke ulokhu uzibuza ukuthi yisiphi isidlo ongapheka ngezithako ezitholakala ekhishini lakho.
Yebo, manje inkinga yakho imboziwe ngoba yilokho iSupercook engakusiza ngakho. Okokuqala, ungavele ungeze izithako ezitholakala ekhishini lakho, bese kuthi le webhusayithi ikunikeze uhlu lwezitsha ongazipheka ngokusebenzisa lezo zinto ezitholakalayo.
6. I-WiKi Kanjani
Ngakho-ke, le webhusayithi ngokuyisisekelo ikusiza ukuba wenze konke nje. Kuyimpendulo kuyo yonke imibuzo yakho. Uma kwenzeka udinga ukuthola ukuthi ungenza kanjani noma yini, kungaba izinto ezimangazayo ze-DIY noma yisiphi isifundo noma yini, ungakuthola lapha. Ungase futhi ubuze imibuzo lapha noma uphendule imibuzo yomunye umuntu.
7. IBig Think
Le yindawo eyabelana ngemibono kanye nokuqonda okuvela kwabanye babantu abaphumelele kakhulu emhlabeni jikelele. Kule webhusayithi, ngeke ukwazi ukuthola ama-life hacks. lapha, kepha uzothola imininingwane yangempela. Ungafunda ngisho nasemaphutheni abanye nasezindabeni zabo zokuphumelela. Kuyindawo enhle yokwazi kubantu ukuthi baphumelele kanjani empilweni yabo. Kuyasiza kakhulu kumuntu ofuna ukuba ngusomabhizinisi futhi aqale ibhizinisi lakhe noma ngubani ozama ukuphumelela kunoma yimuphi umkhakha.
8. Vula Imidlwane
Ngabe niyazithanda izinja? Noma nina bantu ninayo neyodwa ekhaya lenu njengesilwane esifuywayo? Ngakho-ke, le webhusayithi ikukhombisa ama-GIF namavidiyo amancane emidlwane nezinja ezinhle futhi ezinhle futhi ezithandekayo.
Uzohlanya nje ubabone. Ngisho, nami ngiyibonile futhi ngokwethembeka, yenze usuku lwami lwaba ngcono kakhulu. Wonke amavidiyo akhonjiswa kusikrini esigcwele esisezingeni eliphakeme. Uma uthanda izinja, uzoyithanda le webhusayithi.
Sonke siyazi ukuthi i-Spotify ingenye yezindawo ezinhle kakhulu zokuthola umculo. Noma kunjalo, okuwukuphela kwendaba ukuthi, ikhathalogu enkulu ithanda abaculi abadumile. Ngakho-ke, lapha kule webhusayithi, iFogetify ikusiza ukuthi uthole abaculi abangadumile kangako kepha ababuye bakhiqize umculo omnandi ngasikhathi sinye.
Khohlwa yindawo emangalisayo yokuthola umculo omusha nabaculi futhi.
I-GIPHY inama-GIF athandwa kakhulu atholakala kuwebhusayithi yabo asatshalaliswa ngaphezu kwesigidi ku-inthanethi namuhla. Abantu basebenzisa ama-GIFs ngoba ayindlela yokuziveza ngendlela ehlekisayo nengenangqondo. Singathola i-GIf eningi kuzo zonke izimo. Kulezi zinsuku bonke abantu abadala bayawathanda ama-GIFS.
11. Zoom Quilt
Bheka leli sayithi uma ufuna ukulutheka, lapha kuwebhusayithi ngokuyisisekelo ikukhombisa isithombe esisondeza ngokungenamkhawulo ukuveza izithombe ezintsha esithombeni uqobo. Ngakho-ke, kuyindilinga engapheli yezithombe.
ICoolThings ineqoqo lazo zonke izinto ezipholile. Kungaba ukuzijabulisa, amagajethi, noma amathoyizi nokusungulwa, nakanjani kukhona okuthile lapha okuzokuthakazelisa kukwenze uhlanye ngokuqinisekile. Kukhona nesigaba sezipho ezipholile futhi ezihlukile ezitholakalayo ezihlukaniswe ngezigaba zabesilisa nabesifazane.
Le webhusayithi ivuselelwa nsuku zonke, ngakho-ke yenza ngokweqiniso isikhathi esisodwa ezintweni ezithile ezipholile noma izipho noma yini.
13. Izizwe Ezingahlangene
Le webhusayithi isebenza ngeqoqo elihle kakhulu lamavidiyo, izithombe, kanye nezindaba zezizwe ezingathintekile ezihlakazeke emhlabeni wonke. Ikunikeza izindaba ezithokozisayo nokuqonda indlela yokuphila yabantu abangathintwanga ubuchwepheshe banamuhla, i-electronics, nezinye izici zokuphila zesimanje. Futhi, ikunikeza ithuba lokunikela embonweni wabo. Ungavakashela leli sayithi bese ulihlola.
IPostSecret iyiwebhusayithi epholile futhi ethakazelisa kakhulu.Kule webhusayithi, kukhona zonke izinhlobo zezimfihlo kuzo zonke izinhlobo zamakhadi eposi okwenza lokhu kube yiwebhusayithi ethakazelisa ngempela.TO
ll, izivakashi ziyakhuthazwa ukuba zithumele amakhadikhadi angaziwa lapho zibhala khona izimfihlo zazo.
I-Patatap yiwebhusayithi eyingqayizivele futhi exhumanayo ephendula okhiye bekhibhodi yakho ngomsindo ohlukile kanye nopopayi omfushane futhi. Cabanga nje ukucindezela imisho yonke ne-BOOM! Uthole ukuqhuma kwemisindo, imibala, nokunyakaza okuxubekile! Kupholile, akunjalo?
Lapho usuqale ukuthayipha kwezinye izigaba ezingahleliwe, kuba yi-hypnotic yangempela, kude. Kuyindlela emnandi yokuphumula nokuphumula. Ngokuqinisekile uzokujabulela lokhu.
Sibhale amanye amawebhusayithi apholile futhi athakazelisayo ngenhla. Ngakho-ke, manje ngokuzayo noma nini lapho unesithukuthezi futhi ungazi ukuthi yini okufanele uyenze futhi unesikhathi samahhala, ungamoshi nje ngokuya kumasayithi ambalwa amadala athandwayo futhi ubuke into efanayo kaninginingi. Wonke lawa mawebhusayithi anokuthile noma okunye okuzokugcina ujabulile. Ngeke kukwenze ujabule kuphela, kepha nalabo abakuzungezile ngokumane wabelana ngalawa masayithi nabangane bakho nomndeni wakho.
Mane uvakashele lawa mawebhusayithi athakazelisayo esikhundleni sokuphumula ingqondo yakho futhi ukujabulele.
Amawebhusayithi Avuliwe Wemidlalo
I-VPN ehamba phambili yonyaka (2020)
I-Safari ye Windows 10 - Ukulanda Okusemthethweni Kuyatholakala?
uchungechunge lwamahhala lwe-tv lusakazwa ku-inthanethi
ama-movie aku-inthanethi mahhala ukubukwa
ungasibuyekeza kanjani isidlali sohlelo lokusebenza lwe-nox
le tumblr ingaqukatha imidiya ebucayi
amasayithi wokulanda ama-movie aphephile
indlela elula yokuguqula i-youtube ibe yi-mp3
ungabuka kanjani uchungechunge lwe-tv mahhala